China Polyether polyol LEP-330N ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ya Longhua
LEP-330N bụ VOC dị ala, ihe na-eme ka ọ dị elu, polyether polyol dị arọ nwere arụmọrụ nke 3, ịdị arọ molekul nke 5000, na-enweghị BHT. Ngwaahịa ahụ enweghị isi na achọpụtaghị ọdịnaya trialdehyde. Enwere ike iji ya n'ọtụtụ ebe na ụfụfụ resilience dị elu, ịkpụzi, akpụkpọ anụ na-ejikọ onwe ya, CASE na ubi ndị ọzọ.
OHV (mgKOH/g) ： 33.5-36.5 Mmiri (wt%) ≤ .00.05
Uru Acid (mgKOH/g) ≤ .00.05 Agba APHA ≤ ≤30
Mgbasa ịdị arọ molekul.
VOC dị ala, enweghị ọdịnaya trialdehyde
Uru agba dị ala
Mmiri dị n'ime 200PPM
Polyether polyols bụ ihe dị mkpa eji emepụta polyurethanes.
A na -eme Polyether Polyols site na imeghachi ihe ikuku oxide na inatiotor.
Polyols nwere otu hydroxyl reactive (OH) nke na -eme otu isocyanate (NCO) na isocyanates iji mepụta polyurethanes.
Enwere ike kewaa polyurethane n'ime ụfụfụ dị nro, ụfụfụ siri ike na ngwa CASE dabere na arụmọrụ nke polyether polyols.
Enwere ike nweta ihe PU nwere arụmọrụ dị iche iche na mmeghachi omume n'etiti ndị mbido dị iche iche na polymerization olefin.
A na -ekekarị polyols:
LEP-330N na-enye ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị otu njedebe hydroxyl, na-enye ya ọnụego mmeghachi omume dị ukwuu na isocyanates. Enwere ike iji ya na diols ndị ọzọ, triols na polyols polymer iji nweta mgbanwe dị mma nke akụrụngwa.
Enwere ike iji LEP-330N mee ihe n'ọtụtụ ebe na ụfụfụ na-eguzogide, ụfụfụ kpụrụ akpụ. Dị ka ịkpụzi ihe siri ike maka oche ụgbọala; ụfụfụ dị elu maka matraasi sofa; elu-resilience, elu njupụta ụfụfụ na ịkpụzi maka insoles; PU akpụkpọ anụ maka wiilị ụgbọ ala, ogwe ngwa, sofa, oche wdg; Gbanyụọ ngalaba mmepụta ihe, dị ka mkpuchi polyurethane, akara, adhesives, elastomers, wdg.
Asia: China, India, Pakistan, Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia
Afrịka: Egypt, Tunisia, South Africa, Nigeria
Na -echekwa na akọrọ na ventilated ebe. Wepụ ìhè anyanwụ kpọmkwem na anya ọkụ na isi iyi mmiri. A ga-etinyerịrị mkpọrị mepere emepe ozugbo ịpụsịrị ihe ahụ.
Oge nchekwa kacha akwadoro bụ ọnwa 12.
Enwere ike ịmepụta ngwa ahịa ka ọ dị njikere n'ime ụbọchị 10-20 wee bute ya n'ọdụ ụgbọ mmiri China gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri ịchọrọ. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla pụrụ iche achọrọ, anyị nwere mmasị inye aka.
T/T, L/C niile na -akwado.
Nke gara aga: Polyether Polyol LE-310
Osote: Polyether Polyol LEP-335D
Ngwa Polyether Polyol
Polyether Polyol dị iche iche
Polyether Polio dị egwu